Accueil > Gazetin'ny nosy > Rajoelina : Haverina amin’ny tompony ny lakile
Rajoelina : Haverina amin’ny tompony ny lakile
Ny faha 24 febroary 2014 no nanoloran’ingahy Andry Nirina Rajoelina ny lakilen’i Madagasikara hoan’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay lany filoham-pirenena tamin’izany andro izany. Voatery tsy maintsy nandatsaka an’i Hery Rajaonarimampianina ho filoham-pirenena ingahy Andry Nirina Rajoelina sy ny Mapar tamin’izay fotoana izay. Tsy nahazo nilatsaka hofidiana izy satria nisy ilay antsoina hoe « ni …ni » tamin’ireny fotoana ireny. Tsy hiverina amin’ny tantara isika satria efa be no noresahina tamin’ny raharaha ny 2009 izay nahatonga iny fanakanana nataon’ny vondrona iraisam-pirenena azy sy Ravalomanana Marc iny.
Tamin’izany fotoana izany no efa tokony ho lany filoham-pirenena ingahy Andry Nirina Rajoelina. Voatery niala tamin’ny fomba mihaja ny tenany ka nametraka ny lakile tamin’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay lanim-bahoaka tamin’ny salanisa ambany dia ambany. 15% monja tamin’ny fihodinana voalohany. Nandresy ihany nefa izy tamin’ny fihodinana faharoa. Natolotra azy ny lakile. Hita nisoritra tamin’ny tarehiny nefa fa tsy ho zakany izany. Hita taratra teo fa tsy hahazaka firenena ingahy Hery Rajaonarimampianina.
Ankehitriny ary dia hifanoloran’ingahy Rajaonarimampianina Hery sy Andry Nirina Rajoelina indray ny lakile. Tsy maintsy haverina amin’ny tompony nanome azy. Enga anie ka mba ho tarehy miramirana no hanoloran’ingahy Hery Rajoanarimampianina izany fa tsy ho toa ny tamin’ny nandraisany azy. Jereo ange ny sary tamin’izany e!